Kungani Usikhetha - EMpumalanga Ekude
Ingqalabutho e-Pulp Ekholwayo Ebunjiwe Yomshini Wemishini Yezimboni
1. I-Far East ne-Geotegrity ingumkhiqizi wokuqala wemishini ye-fiberware ebunjiwe yetafula eChina kusukela ngonyaka we-1992. Njengoba ineminyaka engama-30 inolwazi lwezitshalo ze-R & D zezitshalo ze-pulp ezibunjiwe ze-R & D kanye nokukhiqizwa, i-Far East ingundunankulu kulo mkhakha.
Siphinde sibe umkhiqizi ohlangene ongagcini nje ngokugxila ku-pulp ebunjiwe i-tableware technology R & D nokukhiqizwa komshini, kodwa futhi nomkhiqizi we-OEM ochwepheshe etafuleni elibunjiwe le-tableware, manje sisebenzisa imishini engu-200 endlini futhi ithumela iziqukathi ezingama-250-300 ngenyanga ngaphezulu kuka-70 amazwe kuwo wonke amazwekazi ayisithupha.
2. I-Far East ne-Geotegrity inemishini yokonga amandla semi-othomathikhi kanye nokonga amandla okusika mahhala ukushaya imishini okuzenzakalelayo esigabeni, sinikela ngokushisa kawoyela nokushisa kagesi ngenketho yekhasimende.
3. I-Far East neGeotegrity ithola ubuchwepheshe obungaphezu kwama-95 obunelungelo lobunikazi kubandakanya ubuchwepheshe bokonga uwoyela bokushisa kanye nokusika mahhala ubuchwepheshe bokushaya mahhala okusiza ukonga izindleko zokukhiqiza eziyi-15%. Imishini iqinisekiswe nge-UL ne-CE. Isiqinisekiso sethu sokusebenza komshini ngu: 50% wokonga amandla, isilinganiso esingaphezu kuka-95% somkhiqizo ophelile, impilo yenkonzo yeminyaka engaphezu kwengu-15 yomshini nesikhunta
4. I-Far East ne-Geotegrity zinikela ngesevisi eyodwa yokumisa yonkana, kufaka phakathi unyaka owodwa iwaranti yomshini, idizayini yobunjiniyela beworkshop, ukwakheka kwe-3D PID, ukuqeqeshwa kusayithi kufektri yomthengisi, imiyalo yokufaka umshini nokuthunyelwa ngempumelelo kwimboni yomthengi, kuqediwe umhlahlandlela wokumaketha umkhiqizo nokunye.